फेरियो मोदीको बोली, घोषणा नहुँदै बाइडेनलाई दिए मोदीले बधाई ! - कान्तिखबर – सम्पुर्ण समाचार हामीसँग
१८ मंसिर २०७७, बिहीबार , ०२:५८
अन्तरराष्ट्रिय ब्रेकिन राजनिति
फेरियो मोदीको बोली, घोषणा नहुँदै बाइडेनलाई दिए मोदीले बधाई !
२०७७ कार्तिक २३, आईतवार ०८:०५ गते
नयाँ दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा डेमोक्रेट उम्मेदवार जो बाइडेनको विजयसँगै भारतको छटपटी शुरु भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आधिकारिकरुपमा जो बाइडेनलाई राष्ट्रपति पदमा विजयी भएको घोषणा नहुँदै भारतीय प्रधानमन्त्रीले भने उनलाई बधाई दिएका छन् । “तपाईले उप राष्ट्रपति हुँदा भारतलाई गरेको सहयोग हामी अहिले पनि सम्झिन्छौं ।” मोदीले भनेका छन, “तपाईको कार्यकालमा हाम्रो सम्बन्ध अझै उचाईमा पुग्ने छ ।”
स्मरणीय कुरा के छ भने यसअघि मोदीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थन गर्दै आएका थिए । अमेरिका भ्रमणमा रहेको बेला र निर्वाचन शुरु भएपछि पनि मोदी र भारतीय मिडियाले बाइडेनलाई पाकिस्तानको मित्र भन्दै प्रचार गरेका थिए ।
जो बाइडेन र पाकिस्तानको निकै निकट सम्बन्ध रहेको मानिन्छ । बाइडेनले पाकिस्तानबाट सम्मान समेत प्राप्त गरेका छन् ।
भारतीय मिडियाहरुले अहिले आएर उप राष्ट्रपति कमला ह्यारिस पनि भारतकै भएको दावी समेत गर्न थालेका छन् । कमलाको जीत हुनु भनेको भारतको जीत हो भन्दै मोदीले उनलाई समेत बधाई दिएका छन् ।
यद्यपी बाइडेनको जीतले भारतलाई भने ट्रम्पकालजस्तो फाइदा हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । डेमोक्रेट पार्टीले राजनीतिकरुपमा घोषित अमेरिकी नीतिभन्दा बाहिर जाने सम्भावना नरहेपनि व्यवहारमा उनीहरुले विश्व राजनीतिमा उदार व्यवहार गर्ने बताइन्छ । सामरिक र सैन्य कुटनीतिका क्षेत्रमा चीनविरुद्धको गठबन्धनका लागि उनीहरुले भारतको साथ खोज्न सक्ने भएपनि विश्व राजनीतिका अन्य मुद्दामा भने भारत र बाइडेन सरकारको नीतिमा मेल खाने देखिदैन ।
२०७७ मंसिर १७, बुधबार २१:१९ गते कान्तिखबर
अन्तरराष्ट्रिय अर्थ ताजा
भारतीय शेयर बजारमा रेकर्ड नै रेकर्डः बजार परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा
२०७७ मंसिर १७, बुधबार ०८:१६ गते कान्तिखबर
२०७७ मंसिर १६, मंगलवार १९:५५ गते कान्तिखबर
अब छिट्टै ब्रोकर कमिसन घट्ने धितोपत्र बोर्डको भनाइ
बुल्लिश लयमा नेप्से, पुजी बजार प्रबेश गर्नेको लर्को -६०००को बिन्दु पार गर्ला त नेप्से ?
माउन्टेन इनर्जीको आईपीओ बिहान १० बजे बाँडफाँड हुँदै !
२०७७ मंसिर १७, बुधबार ०७:४० गते कान्तिखबर
अर्थ ताजा विशेष समाचार
२०७७ मंसिर १७, बुधबार ०७:३३ गते कान्तिखबर